RAVELOSON CONSTANT : MIDONA AMIN’NY RINDRINA RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Efa ankatoky ny 26 Jona isika izao hoy Constant Raveloson teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany, ka nisy zavatra tsaroako. Tamin’ny 25 Jona 2009 tany amin’ny toerana izay niporitsahako tany izay tsy afaka nivoaka io fefy io fa dia tao anatiny tao. Nahavariana hoy izy ny haranitan-tsain’ny ankizy any ambanivohitra, mbola vao volana Jona 2009 dia efa nanao harendrina taratasy. Harendrina taratasy may may may Rajoelina mialà amin’izay fa Ravalomanana ihany ny anay. Tao anatin’ny mbola namaivay mihitsy izany.Angamba teto Antananarivo teto no nararirary hoy Constant, tamin’ny tahotra nataon-dry Charles sy Lylison sy ny sisa, fa ilay ambanivohitra 25km no misy azy ao ambadiky tamboho ao mitondra labozia ny ankizy kely, izany no ataony tamin’ny 2009. 2012 isika rankizy hoy izy ka tanteraka tokoa nyhirahiranareo. Ny etsy amoron’Anosy hoy Constant, tamin’izany fotoana dia tsy misy afa tsy ny fidoroahana toaka, misy fanolanana tao. amin’izao fotoana izao dia nivadika Majuscule, ny fidorohana toaka sy filokana ary tamin’ity taona ity dia niampy tsindron’antsy izany. Fifaliana hafa sy mendrika kokoa noho izao no tandrify ny vahoakatsika hoy izy, satria heverina hoe ny vahoaka milafangatahana no ampifalifaliana eny. Izany no 26 Jona arangaranga amintsika ary ilaikely iry milingilingy eny ambony fiara amin’ny fanasana hanotrona azy eny Mahamasina sy Iavoloha.Izany no mba 26 Jona karakarain-dRajoelina fa mendrika antsika. Ny eritreritsika kosa hoy Constant dia amin’ity 26 Jona ity dia mba efa mitsahatra ny fanenjehana politika, fa mba efa miatrika ny fiainan’ny firenena satria ny firenena iarahamanana. Ny fitokonana no misy , ny fitokonana be dia be mihitsy. Hatramin’ny 2009 isika hoy ity olomboatendry ity, no efa nametraka fa midona amin’ny rindrina io, fa tsy misy firenena hafa hanampy antsika amin’izao fanonganam-panjakana izao. Teny Ambohijatovo isika hoy izy dia nahatsapa fa ny mpisam-panjakana, ny fiarahamiasa amin’ny famantsiambola dia hidona amin’ny rindrina, ka 26 jona 2012 izao io izy io. Nanomboka ny 28 Aprily dia namaky lay ny fidianana an-dalmbe isika, ka na ny mpampianatra aza efa sahy mitarika ny hetsika an-dalambe. Tsy vitan-dRajoelina intsony hoy izy ny mamaha izany,koa izao no fotoana hanitrikitrihana , ajanony aoka izany ny famelezana politika ny Ankolafy Ravalomanana, ka ireo rehetra ireo dia antaonany maro isika no hanarina ireo .Tsy tafarina io raha tsy vita dinika ny mpitarika rehetra. Na izay tianao hoy Constant na hisakana ny Filoha Ravalomanana, tahaka ny hoe misy fahavalo ka hadefasana miaramila eny Ivato, koa aza gaga raha Remabila no tonga eto. Marary anay hoy izy izany 26 Jona izany ka sarin-dRajoelina milingilingy eny ambony fiara no atao ao anaty fanasana, f’angaha fananany ny foloalindahy. Ny 26 jona dia tsingerintaonan’ny foloalindahy fa tsy fetin-dRajoelina. Na izay tiany na hiresaka amin’ny filoha Ravalomanana izy dia hiatrika ny olana rehetra isika na izy mbola hiatrika antsika amin’ny basy, ka ho vaky ity firenena ity. Ny mikasika ny Rio kosa dia nanambara Constant fa fantany fa baraka no hitany any. Ny gidro lasa masikita tamin’ny 2009, ary fantany fa hitsangamenatra izy any satria tompondaka amin’ny fahapotehina. Mitsoatsoaka tsy te hihaona amin’ny Ravalomanana izy ka te hilaza hoe izaho tsy teo tamin’izany. Tsy misy ilana azy Rio hoy izy satria tetezamita isika izao.Fantatsika hoy Constant fa nidirandoza ny havantsika tany Befotaka satria natodika taty amintsika ny fitaovana rehetra.
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 juin 2012 20 juin 2012 Catégories Politique
5 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : MIDONA AMIN’NY RINDRINA RAJOELINA »
mitady vola ndray an!mazana nareo mafana reto!mirediredy rehefa avy navadika t@alalan,ny movansy r8
o anaty vovo rajoelina sy ny jiolahiny..
Ohatry ny lolo milalao amin’ny jiron’ny labozia..
Isika tokony tsy hisary adala amin-drajoelina fa kosa hanamafy ny
fifampianarana o amin’ny fametrahana ny démocratie ,eo amin’ny fanajana ny état de droit ,ka handala ny fahamarinana ,hiaro ny marna ,ny ara-dàlana , ny rariny sy ny hitsiny..!
Tsy nisy niraharaha izany nandritry izay telo taona mahery izay !
Koa heveriko fa tsara sy mendrika Antsika ny mitandro izany mba ho tony sy milamina ny fiarahantsika monina..!
Mivonona Isika , miezaha Isika , mikiriza Isika fa tsy maintsy miova izao fiainantsika izao..Tsy maintsy miova ho tsara , ka aoka Isika ho vonona , fa tsy variana fotsiny miantsoantso ,miandry ny fodian’ny Filoha ,izay fantatsika tsara fa hody izy..!
Malaza be mihintsy anie dada izany e!!dada foana no takiana sy asiana resaka,
mampiovitrovitra ny foza fotsiny manjary mitsingilaila ilay seza efa » pattes jaune »
sisa miazona azy.Tena latsaka kosa aho nahita ilay soratra hoe: « dada joelina « , fa na dia efa paka aza no ho anina
sy lalaovina dia i domelina no antsoina « dada? »izany no hoe: VOAHOZONA angamba.
Ka mba hazavao Rana a! dadanao ahoana Raosy. Nangalatra kely t@ reninao zany izy? Zahay aloha tsy irianay ary tsy ho tianay na oviana na oviana antsoina dada zany Rajoelina. Filoha Rajoelina na Zandry amin’ny maha jeune kely tsy laitran-dRaosy antidahy azy. Tsy menatra ireto, bandy kely otran’iny de nampinana ny raikeliny. Aiza re izany fireharehana sy fihambohamboana fahiny e! Rajoelina Rana, jeune sady beau, no mafy be, tsy tia antsoina dada izany.
Ie tena malaza be dadanareo Rana a! malaza mbola sesintany any Sud Af, malaza any Atsimo any fa dahalon-dRavalomanana ry Remenabila sy ry tokanono. Jiolahy karamain-dRavalomanana ny FAROUCHES! de mandohalika mifompona @n-dRajoelina io, manoratra etsy sy aroa @ SADEC sy ny TROIKA mba mba hanaiky hihaona aminy. Aoka hazava, fa tsy Rajoelina no nitady fihaonana @n-draosy, fa Raosy no nilelaka ny faladihany hihaona aminy. Tena tsisy hambo a! olona efa nampisaoty teo @ sezany ve no hihazakazahana hanaovana arrangement indray. Tena mafy zalahy zany alahelo seza izany, fa na de ny fahavaloa aza ity, ilelafam-paladia a! aza mba tsy ampy solaitra otran-dRaosy sy ny taranany ihany! mapme be le dada malaza!!!! hi!hi!hi
Tena mivika be vôpl zany… foza mivika… tsiajerim-poza foana !!! Inona mou aminareo zany oe tsianjeri-mpoza zany izay Mahalala ô???
Précédent Article précédent : RAKOTONIRINA MANANDAFY : « TSY ZANAK’I DADA » FA MPIRAHALAHY MIANALA
Suivant Article suivant : Magro Antsirabe : Entitra ny zanak’i Dada